Meeye Jamaahiirtii Real Madrid Ee Eedaynayay? - Thibaut Courtois Oo LABA Daqiiqo Oo Kaliya U Baahan Si Uu U Jabiyo Rekoodh Weyn Oo Uu Real Madrid Ku Haystay Keylor Navas | Laacib.net
Meeye Jamaahiirtii Real Madrid Ee Eedaynayay? – Thibaut Courtois Oo LABA Daqiiqo Oo Kaliya U Baahan Si Uu U Jabiyo Rekoodh Weyn Oo Uu Real Madrid Ku Haystay Keylor Navas
Goolhayaha kooxda Real Madrid ee Thibaut Courtois ayaa u muuqda mid meel iska saaraya jamaahiirta kooxdiisa ee bar-tilmaameedka kasoo dhigtay mudooyinkii ugu dambeeyay kaddib markii uu shabaqiisa soo ilaashaday kulamadii u dambeeyay.
Kaddib wixii ka dhacay kulankii Club Brugge ee eedaynta badan loo soo jeediyay, Courtois ayaa intaas kaddib helayay kalsooni isaga oo markale ku xasilay goolka kooxdiisa.
Qaab ciyaareedkiisa wanaagsan ee uu kulamadii ugu dambeeyay soo samaynayay iyo inuu shabaq nadiif ah kuso baxay kulamo badan ayaa ka caawisay inuu goolhayayaal waaweyn kala baxo boosas taariikhda kooxda ay ku lahaayeen.
Kaddib shabaqiisii nadiifta ahaa ee kulankii Eibar ee xalay, Courtois ayaa in ka badan 500 daqiiqo oo xidhiidh ah aan wax gool ah laga soo dhalinin waana taariikh ay kaliya 8 goolhaye kusoo sameeyeen Real Madrid.
Thibaut oo haatan isagu 532 daqiiqo guud ahaan aan shabaqiisa gool lala gaadhin ayaa dhaafay labada goolhaye ee kala ah Agustín(516 daqiiqo) and Juan Alonso (517 daqiiqo) oo iyagu hore taariikhdaas Real ugu soo samaystay.
Goolhayaha ree Belgium ayuu haatan bar-tilmaameedkiisa xigaa yahay ninkii uu booska kala baxay ee Keylor Navas oo isago 533 daqiiqo oo xidhiidh ah shabaqiisa ilaashadan.
Courtois ayaa kaliya u baahan 2 daqiiqo si uu u dhaafo Navas oo ay jamaahiir badani aaminsanaayeen inuu isagu ka fiicnaa wakhtigii laga iibinayay Paris Saint-Germain.